Windows 10 Discount ho an'ny mpianatra - Ahoana ny fomba fampiharana (Guide 2020) - Tolotra
Windows 10 dia iray amin'ireo rafitra miasa be mpampiasa indrindra. Tian'ireo mpianatra ny OS satria mora ny fidirana. Ny ankamaroan'ny fampiharana dia mety amin'ireo fitaovana ireo. Nanjary ankafizin'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny milina Windows. Nanjary zava-dehibe ny fananana ny rafitra fiasa Windows farany.
Mahazo tombony ireo mpianatra amin'ny fampiasana ny OS. Azonao atao ny mahazo ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Microsoft ianao. Ity dia fomba iray famerenana amin'ny laoniny ny fiaraha-monina ny goavam-be teknolojia. Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka momba ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra izahay.
Manana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Windows 10 ve i Microsoft?
Microsoft dia tsy mazoto mihazakazaka ny fihenan'ny mpianatra. Tsy hahita fivarotana Windows 10 mavitrika ho an'ny mpianatra ianao.Mora anefa ny mahita safidy hafa. Misy tranokala vitsivitsy manolotra fifanarahana mahavariana anao. Androany isika dia hijery ny tranokala OnTheHub. Sehatra iray manome hery ny mpianatra izy io.
Afaka mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 95% amin'ny rindrambaiko fanabeazana ao amin'ny tranonkala ianao.Manolotra drafitra ho an'ireo mpampiasa Windows 10 ihany koa izy ireo.Afaka mahazo ny rafitra fiasan'ny Windows 10 maimaim-poana ny mpianatra. Microsoft dia mpiara-miasa mavitrika amin'ity sehatra ity.
Fanolorana mpianatra hafa azonao ampiharina:
Fihenan'ny mpianatra Microsoft Office
Discount ho an'ny mpianatra Disney Plus
Dingana ahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Windows 10:
Afaka mahazo tombony tombony amin'ny Windows 10 amin'ny mpianatra ny OnTheHub. Ankafizo ny OS maimaim-poana amin'ny fampiasana tranokala. Ny kinovan'ny mpianatra dia mitovy amin'ny fanontana orinasa an'ny rindrambaiko. Ireto ny dingana hahazoana ny tombotsoan'ny mpianatra mahafinaritra.
Afaka manomboka amin'ny fitsidihana ny tranonkala ofisialy ny mpianatra. Ity ny rohy ho an'ny sehatra - https://onthehub.com/ . Hahita an'i Microsoft ho mpiara-miasa ofisialy amin'ny pejy fandraisana ianao.Afaka mikaroka ny fanontana Windows 10 Student amin'ny tranonkala ny mpampiasa. Ilaina ny fitaovana fikarohana ary manome safidy haingana ianao.
Rehefa misokatra ny pejin'ny mpianatra Windows 10 dia ho hitanao fa misy maimaim-poana izany. Ireo mpampiasa dia afaka manindry ny fanamarinana ny fahazoana mandray an-tanana an'ity tolotra ity.
Mila mampiditra antsipiriany madinidinika ianao raha te hahalala raha mahazo an'ity fihenam-bidy ity ny sekolinao. Ny mpianatra dia mila miditra amin'ny fireneny, faritany ary an-tsekoly. Manoro hevitra anao izahay mba hampidirinao tsara ny antsipiriany rehetra.
Ireo mpampiasa izay afaka mahazo fihenam-bidy dia afaka misoratra anarana hamorona kaonty. Afaka manomboka mahazo tombony ho an'ny mpianatra mahafinaritra eo amin'ny lampihazo ianao. Ny tranonkala dia mitaky anao hisoratra anarana amin'ny fampiasana kaonty mailaka .edu. Hanome anao fidirana eo noho eo ny fitaovana rehetra amin'ny varotra.
Tombony ho an'ny mpianatra ofisialy Microsoft:
Microsoft koa dia manolotra tombony fanampiny ho an'ny mpianatra. Afaka mahazo fihenam-bidy mahazatra amin'ny fitaovana Windows 10 ianao. Ireo dia miaraka amin'ny fahazoan-dàlana napetraka ao amin'ny fitaovana. Tombony iray hafa amin'ny fisoratana anarana amin'ny kaontin'ny mpianatra ny fidirana maimaim-poana amin'ny birao 365. Afaka misitraka tombony tombony amin'ny tombony ny mpianatra amin'ny alàlan'ity sehatra ity. Ilaina izany ho an'ireo izay mianatra amin'ny alàlan'ny fitaovana lavitra. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny Microsoft office 365 amin'ny alàlan'ny kaonty mailakao fipihana eto .
Toeram-pianarana ho an'ny mpianatra koa dia toerana tsara ahazoan'ny mpampiasa tombontsoa tena tsara. Ity ny rohy .
Manantena izahay fa hamaly ireo fanontanianao momba ny fomba ahazoana ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Windows 10 ity torolàlana ity. Atombohy amin'ny famokarana miaraka amin'ity sehatra ity ny vokatrao. Andramo anio ary manatsara ny fahaizanao.
5 Android Emulator tsara indrindra ho an'ny Windows 10
Ahoana ny fomba hampiasana ny Pluto TV?
Tiny Tina's Wonderlands: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny lalao, ny daty famoahana ary ny maro hafa!
5 Kolejy Community tsara indrindra any Michigan
aiza no azonao jerena amin'ny Internet
fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana streaming reddit
fampiharana camscanner misintona maimaim-poana ho an'ny android
fanitarana Chrome chrome antoko fampiasa amin'ny fomba fampiasana
tsy mila misoratra anarana amin'ny tenanao
ny fomba hahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra adobe